PlexEarth उपकरण २.० बिटा उपलब्ध छ - Geofumadas
मे, 2010 अटोक्याड-Autodesk, गुगल अर्थ / नक्सा, भिडियो
एक दिन अघि मैले तिनीहरूलाई भनेँ ओटो सीएडीका लागि PlexEthth उपकरणहरूको 2.0 संस्करणले AutoDesk विकासकर्ता सञ्जाल (एडीएन) को एक सदस्यको भागमा Google पृथ्वीमा देखेको सबै भन्दा व्यावहारिक घटनाहरु मध्ये एक ल्याउनेछ। आज बीटा संस्करण जारी गरिएको छ, डाउनलोड गर्न सकिन्छ, परीक्षण र यी चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण कुरा: रिपोर्ट सम्भव छ त्रुटिहरू.
यस संस्करणमा नयाँ के हो?
यो चाखलाग्दो छ कि यो बीटा संस्करण नि: शुल्क छ, जबकि व्यावसायिक संस्करण रिलिज भएको छ, जुन मलाई भनिएको थियो - जुन २०१० को शुरुवातमा। जो कोही निदाउँछ उसले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्षम हुनेछैन।
केहि भन्दा पहिले मैले केहि दिन पहिले देखेको तुलनामा सब भन्दा राम्रो: अब यो स्प्यानिश र AutoCAD द्वारा समर्थित अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छ:
हो, यो संस्करण AutoCAD २०० or वा अघिल्लो भन्दा अघि चल्दैन, तर २०१० र २०११ मा। यसले काम गर्दछ:
स्वतः सीएड® 2010-2011
स्वतः सीएडी® सिविल 3D® 2010-2011
AutoCAD® नक्सा 3D 2010-2011
स्वतः सीएडी® वास्तुकला 2010-2011मूल्य र इजाजत पत्रमलाई इजाजतपत्रको मूल्य थाहा छैन, हामी यो जूनसम्म जान्ने छौं। मलाई के थाहा छ कि त्यहाँ एक प्रकारको लाइसेन्स मात्र हुनेछैन तर प्रो र एक प्रीमियम ह्यान्डल गरिनेछ, जुन मलाई मूल्यको मापन गर्न राम्रो देखिन्छ। मलाई यसको सिर्जनाकर्ताहरू मध्ये एकबाट पनि सूचित गरिएको थियो, कि उनीहरूले बीटा संस्करण डाउनलोड गर्ने र यसलाई दर्ता गर्नेहरूलाई विशेष छूट दिनेछ।
प्रो संस्करण: यसमा Google धरती छविहरूसँग अन्तरक्रियाको विशेषताहरू समावेश हुनेछ, जुन जुन अहिलेसम्म मैले देखेको छैन अर्को अनुप्रयोगले स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्दछ:
एक बहुभुज भित्र वा मार्गको साथमा छविहरूको मोज़ेक, या त आयताकार क्षेत्रहरूमा।
एक विशिष्ट तत्वको रूपमा चित्र आयात गर्नुहोस्, एक विशिष्ट साइटको एक्सटेन्सनमा।
Google Earth मा AutoCAD मा भौगोलिकृत चित्रहरू निर्यात गर्नुहोस्।
वस्तुहरू Google Earth मा निर्यात गर्नुहोस्।
AutoCAD बिन्दुहरू, बहुभुज वा Google धरतीको पृष्ठभूमिमा मार्गहरूबाट आकर्षित गर्नुहोस्।
Dwg मा आकर्षित गर्न, स्न्याप विकल्पको साथमा Google Earth मा सीधा स्क्यान गर्नुहोस्।
म यस संस्करण को व्यावहारिकता द्वारा मोहित हूँ, किनकि अब मोज़ेक मा छवि डाउनलोड गर्न या एक बहुभुज मा आधारित हुन सक्छ।
El भिडियो Yutube मा पोस्ट गरियो यो धेरै व्यावहारिक छ, यसले कसरी तपाईं मोजाइक रोडवे वा एक मार्गमा रेष्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँदछ (मार्ग).
प्रीमियम संस्करण: यसमा, डिजिटल मोडेलको कार्यात्मकता थपिनेछन्, AutoCAD को आधारभूत संस्करणको साथ पनि, PlexEthth उपकरणले यी कार्यक्षमताहरू थप्छ जुन केवल Civil3D बाट गर्न सकिन्छ।
भू-भाग बिन्दुहरु र समोच्च रेखाहरू आयात गर्नुहोस् (समोच्च लाइनहरू)
सतहहरू, ब्रेकलाइनहरू वा पदोन्नति पाठहरूबाट सतहहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
सतहहरु को बीच मात्रा को गणना
स्तर घट्नेहरू, जस्तै Civil3D मा
बिन्दुहरूमा उचाइ असाइन गर्नुहोस् र 3D सिर्जना गर्नुहोस् polylines बाटोमा।
लेबुल तह घटाउ, सतह आयाम वा संस्करणहरू।
यसमा ढलान वा उचाई जानकारी, साथै क्षेत्र वा दूरी गणना को लागी एक उपकरण छ।
यी सतहहरू दुवै Google धरतीबाट आयात गर्न सकिन्छ, वा अर्को कार्यक्रम जस्तै Civil3D।
PlexEthth डाउनलोड गर्नुहोस्.
यो लेखको बारेमा कुरा गर्छ PlexEthth 2.5 बाट समाचार
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो लैटिन अमेरिकाका लागि पावरसिभिल, पहिलो छाप
अर्को पोस्ट कुल स्टेशन सोकिया SET 630RK परीक्षण गर्दैअर्को »
Rep जवाफ "PlexEarth उपकरण २.० बिटा उपलब्ध छ" लाई
जुआन कार्लोस पिनeda भन्छिन्:
ठूलो योगदान, विशेष गरी प्रारम्भिक सर्वेक्षणका लागि
ठिक छ, यो तपाईंको म्यानुअलको साथ आउँदछ। यद्यपि यो बीटा संस्करण हो, अन्तिम अन्तिम अझै उपलब्ध छैन।
यस उपकरणको लागि त्यहाँ एक म्यानुअल उपलब्ध हुनेछ
बीटा ओटोक्याड 2010 र 2011 64 बिट्सको लागि पनि उपलब्ध छ।